Ch 5 John – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaJohani / Ch 5 John
5:1 Shure kwezvinhu izvi, kwakava nemutambo zuva wevaJudha, uye Jesu akakwira kuJerusarema.
5:2 Zvino paJerusarema ndiye Pool Uchapupu, izvo nechiHebheru Unonzi Place Nengoni; ine porticos shanu.
5:3 Pamwe izvi akarara vazhinji vairwara, mapofu, zvirema, uye waoma, kumirira kwebasa mvura.
5:4 Zvino panguva mutumwa waShe achazoburuka mudziva, uye saka mvura rikashamiswa. Uye ani naani wakaburukawo pakutanga mudziva, mushure inofamba kwemvura, akaporeswa chero utera vaimupa.
5:5 Uye kwakange kune umwe munhu panzvimbo iyoyo, ndichivimba chifo kwemakore makumi matatu namasere.
5:6 ndokubva, apo Jesu akanga aona iye akatsenhama, uye paakaziva kuti akanga achitambudzika kwenguva refu, akati kwaari, "Unoda kuporeswa?"
5:7 The sakosha akamupindura: "Ishe, Handina munhu anondibatsira mudziva, kana mvura yave yabvongodzwa. Nokuti sezvo ndinoenda, mumwe pairi anonditangira. "
5:8 Jesu akati kwaari, "Simuka, tora rukukwe rwako, uye famba. "
5:9 Pakarepo murume uyu akaporeswa. Akatora rukukwe rwake akafamba. Zvino nhasi raiva sabata.
5:10 saka, vaJudha vakati kumunhu uya akanga aporeswa: "Nhasi iSabata. Hazvisi pamutemo kuti utakure rwako. "
5:11 Akavapindura, "Munhu ini akaporesa, akati kwandiri, 'Tora rukukwe rwako ufambe.' "
5:12 saka, vakamubvunza, "Ndiani murume, iye akati kwauri, 'Takura rukukwe rwako ufambe?' "
5:13 Asi uya akanga apiwa utano ndisingamuzivi ndiani. Nokuti Jesu akanga kutsauka revanhu rakaungana panzvimbo iyoyo.
5:14 mushure, Jesu akamuwana ari mutemberi, uye akati kwaari: "Tarirai, iwe vaporeswa. Musatora kutadza mberi, zvimwe chimwe chakanyanya kuipa chingaitika kwauri. "
5:15 Uyu murume akaenda, uye iye vakaudza vaJudha kuti ndiJesu akanga amupa utano.
5:16 Nokuda kwaizvozvi, vaJudha vakatambudza Jesu, nokuti akanga achiita zvinhu izvi nomusi weSabata.
5:17 Asi Jesu akavapindura, "Kunyange zvino, Baba vangu kushanda, uye ndiri kushanda. "
5:18 uye saka, nekuti izvi, vaJudha vakanga vachitsvaka kumuuraya zvakatonyanya. Nokuti haana chete haana kuputsa Sabata, asi iye kunyange akati kuti Mwari aiva Baba vake, achizvienzanisa naMwari.
5:19 Zvino Jesu akapindura akati kwavari: "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, Mwanakomana haagoni kuita chinhu oga, asi chete zvaaona Baba vachichiita. Nokuti chero zvaanoita, kunyange izvi Mwanakomana kuita, saizvozvowo.
5:20 Nokuti Baba vanoda Mwanakomana, uye iye vanomuratidza zvose zvavanoita. Uye mabasa makuru pane aya haazovi iye, zvokuti unofanira kunetseka.
5:21 Nokuti sezvo Baba vachimutsa vakafa uye vachivapa upenyu, saizvozvowo zvinoita Mwanakomana upenyu waanoda achida.
5:22 Nokuti Baba havatongi munhu. Asi iye wakapa kutonga kwose kuMwanakomana,
5:23 kuti vose vakudze Mwanakomana, sokukudza Baba. Usingatendi vakudze Mwanakomana, asingachengeti kukudza Baba vakamutuma.
5:24 Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, kuti ani naani anonzwa shoko rangu, uye achitenda uyo akandituma, anoupenyu husingaperi, uye haana kupinda mutongo, asi pachinzvimbo iye michinjikwa kubva murufu upenyu.
5:25 Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, kuti awa rinouya, uye ikozvino, apo vakafa vachanzwa inzwi reMwanakomana waMwari; uye vaya vanoanzwa achararama.
5:26 Nokuti sezvo Baba vano upenyu mavari, saizvozvowo iye akapa Mwanakomana kuti ave noupenyu maari.
5:27 Uye wakamupawo chiremera kuita mutongo. Nokuti iye ndiye Mwanakomana womunhu.
5:28 Regai kuva vakashamiswa ichi. Nokuti nguva iri kuuya vose vari mumakuva vachanzwa inzwi roMwanakomana waMwari umo.
5:29 Uye avo vakaita zvakanaka uchabuda kumuka kwoupenyu. Asi zvechokwadi, avo vakaita zvakaipa anofanira kuenda rumuko kutongwa.
5:30 Ini handigoni kuita chinhu pachangu. Sezvo I kunzwa, saka itai I kutonga. Uye kutonga kwangu kwakarurama. Nokuti handitsvaki kuda kwangu, asi kuda kwaiye akandituma.
5:31 Kana ndichinge kupa uchapupu pamusoro pachangu, uchapupu hwangu hahusi hwechokwadi.
5:32 Pane mumwe anopa uchapupu pamusoro pangu, uye ndinoziva kuti uchapupu raanopa nezvangu ndehwechokwadi.
5:33 Iwe nhume kuna John, uye akapa uchapupu chokwadi.
5:34 Asi Handigamuchiri uchapupu hunobva kumunhu. pachinzvimbo, Ndinotaura izvi, saka kuti iwe uponeswe.
5:35 Aiva chiedza unopfuta nokuvhenekera. Saka imi makasarudza, panguva, zvokufara muchiedza chake.
5:36 Asi ndakabata uchapupu hukuru kupfuura hwaJohani. Nokuti mabasa naBaba kwandiri, saka kuti ndive kuapedza, izvi zvinoshanda pachavo kuti ndinoita, kupa uchapupu pamusoro pangu: kuti ndiye Baba vakandituma.
5:37 Uye Baba vakandituma ane pachake akapa uchapupu pamusoro pangu. Uye iwe Hamuna kutombonzwa inzwi rake, kana Unoona chitarisiko chake.
5:38 Uye hamuna shoko rake rinogara mamuri. Nokuti uyo akatuma, chete iwe vasingatendi.
5:39 Dzidza Magwaro. Nokuti imi munofunga kuti mune upenyu husingaperi. Asi naivowo kupa uchapupu pamusoro pangu.
5:40 Uye hausi kuda kuuya kwandiri, kuti muve neupenyu.
5:41 Handigamuchiri rukudzo kubva kuvanhu.
5:42 Asi ndinoziva kuti, kuti hamuna rudo rwaMwari mamuri.
5:43 Ndakauya muzita raBaba vangu, uye mukasandizivisa kugamuchira. Kana mumwe uchasvika zita rake, iye uchabvuma.
5:44 Makadii unogona kutenda, iwe vanogamuchira kukudzwa kunobva kune mumwe nomumwe uye asi regai kutsvaka kukudzwa kunobva kuna Mwari oga?
5:45 Regai funga kuti ndingadai mhosva kuna Baba. Pane Mupomeri iwe, Moses, mune vamunotarisira.
5:46 Nokuti kana iwe vakanga vasingatendi Moses, zvichida mungadai maitendawo mandiri neniwo. Nokuti akanyora nezvangu.
5:47 Asi kana musingatendi kubudikidza zvaakanyora, muchatenda sei nemashoko angu?"